Deepfakes तिनीहरू के हुन् र त्यो लामो समयसम्म यो घटना भएको छ? मार्टिन भिजल्याण्ड
Deepfakes तिनीहरू के हुन् र त्यो लामो समयसम्म यो घटना भएको छ?
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	26 जून 2019 मा	• 1 टिप्पणी
मैले बारम्बार प्रविधिहरूलाई चर्चा गरेको छु जसको साथ गहिरो वर्णहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। नयाँ पाठकहरूका लागि, म यो शीर्षकको लागि समर्पित विशेष लेखमा थोरै विवरणमा यहाँ दोहोर्याउन चाहन्छु। किनभने तपाईं दैनिक दैनिक पछ्याउनुहुन्छ भने, यो महत्त्वपूर्ण हो कि तपाई यस विषयसँग परिचित हुनुभयो, किनकी तपाइँ केवल मानिसहरू खेल खेल्ने किसिमका किसिमका उपलब्ध छन् हेर्छन्। धेरै सजिलो।
Deepfakes GAN (Generative Adversarial Networks) को माध्यम ले बनाइयो) सफ्टवेयर प्रविधिहरू। यो कृत्रिम बुद्धिमानी सफ्टवेयर हो जुन, एक नेटवर्कमा बहु एआई प्रणालीमा आधारित छ, क्यारेक्टरहरू कुनै पनि चीजबाट बाहिर निस्कन्छ। एआई कृत्रिम खुफियाका लागि अंग्रेजी हो; कृत्रिम बुद्धि को लागी खडा छ। अर्को AI नेटवर्क त्यसपछि पहिलो सञ्जालको सिर्जना गरिएको छविहरू परीक्षण गर्दछ र अस्वीकार वा अनुमोदन गर्दछ। यो चक्रमा गरेर, क्यारेक्टर प्रत्येक चरणको साथ यथार्थवादी बन्यो, ताकि तपाईं अन्ततः पूर्ण रूपमा काल्पनिक व्यक्ति उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ जसले साधारण रोजगारी व्यक्तिलाई हेर्छ (जसलाई तपाइँ मात्र सडकमा भेट्न सक्दछ)। यदि तपाइँ कसरी यो काम गर्ने बारे जान्न चाहानुहुन्छ भने, पहिला NVIDIA बाट भिडियोहरू हेर्नुहोस् (पीसीका लागि प्रसिद्ध ग्राफिक्स कार्ड निर्माता)।
यो जान्न उपयोगी छैन कि यो गहिरो प्रविधि अवस्थित छ, तर कसरी गहिरो वर्ण प्रयोग गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, भिडीयो वा सोशल मिडिया प्रोफाईलहरू सिर्जना गर्नुहोस् (सम्पूर्ण इतिहास सहित; फोटोहरू र भिडियोहरू र अरूबाट मनपर्नेहरू सहित) गहिरो सामाजिक मीडिया प्रोफाइलहरू)। उदाहरणका लागि, सोशल मिडिया छलफलहरू सजिलै संग "घरका कर्मचारीहरू" वा टेलीमार्केटिङ एजेन्सीको कर्मचारीहरू द्वारा अनलाईन अनुगमन गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, जहाँ तपाइँसँग छलफल गर्ने क्यारेक्टरहरूले यस्तो गहिरो प्रोफाइल पछि (लुकाइएका प्रोफाइलहरू जसले गहिरो प्रोफाइलहरू भरिएको छ) पछि लुकेको छ। ती व्यक्तिहरूले निश्चित दिशामा मानिसहरूलाई बीचको भावनालाई पछाडि छलफलमा उनीहरूको समयरेखामा मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न सक्छन्।
हामी सबै अनुप्रयोग सम्भावनाहरू हेर्छौं, तर हामी सुरू गर्नु अघि, यो जान्न उपयोगी छ कि खेल र चलचित्र उद्योग, तर टिभि उत्पादकहरूसँग लामो समयको लागि यस्ता प्रविधिहरू छन्। तथापि, काम अब यो सरल बनाइएको छ कि तपाइँ यसलाई घर-बगैंचा-र-भान्सा पीसीमा गर्न सक्नुहुन्छ।
जब फास्ट र थोरै एक्सएनएमएक्सएक्स रेकर्डिंग को बीचमा पल वाकर को मृत्यु भयो, वल डिजिटल कम्पनी को पॉल वाकर को फिलिम को संस्करण को पूरा गर्न को लागी बुलाया थियो। पुरानो छविहरू, पावलका भाइहरूको शरीर स्क्यान र पावलको टाउकोको अङ्ग्रेजीकरणको तरिकामा संयोजनको आधारमा, वेटा डिजिटलले पल वाकरलाई जीवनमा फिर्ता ल्यायो। तलका भिडियोहरूले यो काम कसरी गर्ने सारांश प्रदान गर्दछ।
3D गति कब्जा प्रविधिको वर्षहरुका लागि अस्तित्वमा छन् जसमा अभिनेताहरूले आफ्नो आचरण रिकार्ड गर्न सूट लगाउँछन् र त्यसपछि असीमित क्यारेक्टरहरू डिजिटल रूपमा सीजीआई मार्फत सिर्जना गरे। त्यो पल वाकर को लागी प्रयोग गरिएको प्रविधिमा तुलनात्मक छ, केवल गति अभिनेत्री सुतेको प्रत्यक्ष अभिनेता संग। त्यो प्रविधिको अब कम बजेटका साथ उपलब्ध व्यक्तिहरूको लागि उपलब्ध छ (तल भिडियो हेर्नुहोस्), तर एक राम्रो उदाहरण हो जुन यो प्रविधि पहिले नै प्रयोग भएको छ 2009 बाट चलचित्र अवतार (हेर्नुहोस् यहाँ).
NVIDIA पहिले नै यी सूटहरू र CGI प्रविधिको प्रयोगसँग पकडिएको छ, किनभने यसले सफ्टवेयरलाई प्रशिक्षित गर्न तंत्रिका सञ्जालहरू प्रयोग गर्दछ। वास्तवमा, गहिरो अनुहार पछि यो एक नै प्रविधी हो। NVIDIA अब न केवल अस्तित्वको अनुहार उत्पन्न गर्न सक्षम छ, तर एक क्यामेराको साथ एक शहर मार्फत ड्राइभ गर्न र यसलाई सर्दिस परिदृश्यमा बदल्न सक्छ (वास्तविक समयमा)। यस्तो प्रविधिको उदाहरणले उदाहरणका लागि हुन सक्छ कि सवारी चालकहरुको परिमार्जनमा आत्म-ड्राइभिङ्ग कारहरुको एआई सफ्टवेयर प्रशिक्षित गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरू पनि गति समात्न सूट अनावश्यक बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक साधारण GoPro क्यामेरा वा वेब क्यामेरा पर्याप्त छ। 1 बाट एउटा अवलोकन लिनुहोस्: 03 मिनेट। हेर्नुहोस् तलका भिडियोमा कसरी काम गर्दछ।
अब तपाई सोच्न सक्नुहुनेछ कि वास्तविक समयमा यो गर्न को लागी अवस्थित छैन। फेरि सोच्नुहोस्। हामीले पहिले देखि नै देखेको छ कि जेनेरेट एडवर्सेरियल नेटवर्क मार्फत गैर-अवस्थित व्यक्तिहरू सिर्जना गर्न सम्भव छ। अब हामी जान्दछौं कि एक शहरी वातावरण र एक चरित्र तंत्रिका नेटवर्क मार्फत उत्पन्न गर्न सकिन्छ। प्रश्न भनेको यो वास्तविक समयमा पनि सम्भव छ कि। यो जहाँ वास्तविक समय अनुहार पुनः प्रविधिको प्रविधि हो। यो वर्ष 2015 बाट सरल गृह पीसीको लागि रहेको छ (तल भिडियो हेर्नुहोस्)।
सबैले, हामी यसो भन्न सक्छौं कि गहिरो नक्कली भिडियोहरू सिर्जना गर्न वर्षहरू यो सम्भव छ। तथापि, टेक्नोलोजी एड्वेरेरेरियल नेटवर्क, तंत्रिका सञ्जाल र वास्तविक-समय अनुहार पुनःसंरचनाको उद्भवको साथ अहिलेसम्म टेक्नोलोजी यति सरल बनाइयो, जुन तपाई वास्तवमा एक अवस्थित व्यक्तिको सम्पूर्ण मिनेटमा केहि मिनेटमा सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, एक अवस्थित व्यक्तिको प्रत्यक्ष साक्षात्कार कुनै क्यामेरा परिप्रेक्ष्य र कुनै मौसम अवस्थाबाट कुनै पनि वातावरण बनाउन सक्छ।
यो के प्रभावहरू छन्? सुरु गर्नका लागि, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं 100% वर्षहरूमा भरोसा गर्न सक्षम हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् यहाँ कतिपय सीजीआई प्रविधिको चलचित्र उद्योगमा कसरी प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि, यस समय यो धेरै सरल छ कि केहि हज़ार यूरोको बजेटको साथ पहिले नै यो गर्न सक्दछ। यदि हामी मान्दछौं कि मिडिया ठीक छ, तब हामी मान्न सक्छौं कि ती वर्षहरुका लागि ती प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छैन। यद्यपि, यदि हामी खातामा सम्भव छ कि सरकारहरूले मनोवैज्ञानिक कार्यहरू प्रयोग गर्नका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा नयाँ र कठोर कानुनको स्वीकृति मोडमा ल्याउनको लागी, त्यसोभए हामीले यो अनुभव गर्नु पर्छ कि वर्षौंको लागि तकनीकी रूपमा नकली समाचार उत्पादन गर्ने तरिकामा केहि फरक छैन। यस सन्दर्भमा यो धेरै रोचक छ कि देशको सबैभन्दा ठूलो न्यूज एजेन्सी (एल्गेमिन नेदरल्यान्ड्स पर्ब्युकू; संक्षिप्त अफगानिस्तान) एक टीवी निर्माता (जो एक अरबपति पनि हो) को हातमा छ। हामी कत्तिको ठुलो हुनु पर्दछ कि यो प्रविधिहरु सालको लागि प्रयोग गरिएको छैनन?
यो देखिन्छ कि मिडियाले उत्सुकतासाथ रिसार्ज गर्न खोजेको छ कि मार्टिन व्रिजल्याण्डले ठूलो मुख्य स्ट्रीम मिडिया जहाजको तल निस्क्यो। धेरै वर्षको लागि, म व्याख्या गर्दैछु कि मिडियाले छविहरू हेरफेर गर्न सक्छ। जर्ट केल्डर र अलेक्जेंडर क्लोपिंगले केडीई र क्लोपिंग टिभि कार्यक्रममा अनुमति दिएको थियो देखाउनुहोस् कुन गहिराइहरू छन्। रेडियो कार्यक्रम पनि तस्बिर निर्धारणकर्ताहरू बीएनआर निइसेफ्रार्रिया (धारणा प्रबन्धक) हालै मैले उल्लेख गरेको छु कि मैले धेरै लामो बारेमा लेखेको छु। यो स्पष्ट छ कि दह्रो सधैं सचेत छ र कार्यक्रम निर्माताहरूले दर्शक र श्रोतालाई बोर्डमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईं मीडिया र लोकतान्त्रिक मा भरोसा जारी राख्नु पर्छ, किनकि यो भीड विस्फोटक (जर्ट तहखानेका शब्दहरु बोल्न) भन्दा केहि पनि खराब छैन।
निस्सन्देह सबैको लागि "समाधान" हो कि सरकारहरू र प्रविधिहरू चलचित्रहरूमा एक किसिमका वाटरमार्क थप्न प्रयास गरिरहेका छन्, ताकि तिनीहरू प्रामाणिकताको लागि जाँच गर्न सकिन्छ। एकमात्र प्रश्न यो हो कि यदि सरकारहरूले आफैलाई सार्नको लागि धक्का गर्न र मानिसहरूलाई खेल्न वा चाहे वाटरमार्क यति विश्वसनीय छ कि सालोंका लागि नक्कली समाचार प्रयोग गरिरहेको छ। कसाई आफ्नो मासुलाई अस्वीकार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? होइन, अवश्य होइन। जॉन डे मोल, एनओएस, डी टिलेग्राफका सबै समाचारहरू र यसैले सधैं पूर्णतया विश्वसनीय र ईमानदार भएको छ! खरानी के तपाई साँच्चै सोच्नुहुन्छ कि जन डे मोल टिभीमा आज वा कलमा देखा पर्नेछ: "माफ गर्नुहोस् महिलाहरु र सज्जनहरु, मैले सबै टीवी स्टुडियो र सफ्टवेयर संग नकली समाचार बनाएको छु जुन मेरो निपटानमा छ। मैले तपाईंलाई नकली खबरहरू प्रस्तुत गरेको छु र करको बत्तीको मूल्यमा मनोवैज्ञानिक कार्यहरु संग खेलेको छ र मेरो थलो भरिएको छ"? होइन, अवश्य होइन। अनि निस्सन्देह तपाईलाई मीडिया र सरकारमा विश्वास राख्नु पर्छ किनकि तपाई र अरूलाई भरोसा गर्नुपर्दछ? पढ्नुहोस् यहाँ...
सम्भावित गहरी अनुप्रयोगहरू:
गहिरो सामाजिक मीडिया प्रोफाईलहरू
फोटो र भिडियोहरू भूतपूर्व परिवार र साथी सहित
एक अवस्थित व्यक्ति संग प्रत्यक्ष साक्षात्कार
सुरक्षा क्यामेराबाट तस्बिरहरू
भिडियोमा प्रमाणपत्रको रूपमा भिडियो (नक्कली समाचार उत्पादनहरू)
स्रोत लिङ्क सूची: bnr.nl, wikipedia.org
कसरी मीडियाले एआई (कृत्रिम बुद्धि) संग नकली समाचार बनाउन सक्छ।
ट्याग: Adversarial, ai, CGI, deepfakes, डिजिटल, अनुहार, विशेष, GAN, जेनरेट, खुफिया, कृत्रिम, औसत, नकली समाचार, सञ्जालहरू, तंत्रिका, समाचार, NVIDIA, पुन: निष्क्रिय, वाटा
26 जून 2019 मा 06: 15
यो ग्रहका नेताहरूले अझै पनि त्यस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन्। तिनीहरू प्रविधिको सम्बन्धमा समय संग रहन्छन्। अतीतमा तपाई पनि एकदम अस्तित्वको साथ पागल भएका सम्पूर्ण जनजातिहरू चलाउन सक्नुहुनेछ। पुस्तक रोल्स र यस्तो मद्दतको साथ इतिहास नियन्त्रण गरेर तिनीहरू सधैं हाम्रो एक कदम अगाडि बढेका छन्।
अतीतमा त्यहाँ मार्टिनको व्यक्ति थिए जसले मानिसलाई बेवकूफ बनाइदिए।
खराब कुरा भनेको आज मान्छेहरु को लागी कि उनि हाम्रो पूर्ववर्ती भन्दा स्मार्ट हो। म धेरै सोचिएको छैन कि, हामी अझै पनि दास एक काट र एक पेय को लागि कडा परिश्रम गरिरहेका छौं।
तिनीहरूले यसो भनिन् "तपाईलाई सबै कुरा विश्वास गर्ने छैन"
आज हामी भन्छौं "तपाईंले हेर्नुहुने सबै कुराहरूमा विश्वास गर्नुपर्दैन"
« अर्को दिन अर्को शुक्रबार अजा शेपा बाट कटवाजीको बन्द सर्कलमा "दफन" भयो
जलवायु सम्झौता: एक राम्रो जैकेट मा मान्छे चोरी »
कुल भ्रमण: 14.465.387
ठुलो Sinterklaas पदोन्नति: सुन्दर आश्चर्य सुन्दर प्याकेज!
SandinG op इतिहास जान्नुहोस् संयुक्त राष्ट्र एजेन्डा 2030 बुझ्नका लागि
क्यामेरा2op डर्क विरसुमको हत्याको बारेमा के सत्य छ र त्यो 'मुकुट गवाह' को अर्थ के हो?
SalmonInClick op एक पुलिस राज्यमा, तपाईं फिलिपिन्स पुलिस र "मद्दत" प्रदायकहरूमाथि प्रतिबन्ध चाहानुहुन्छ
क्यामेरा2op एक पुलिस राज्यमा, तपाईं फिलिपिन्स पुलिस र "मद्दत" प्रदायकहरूमाथि प्रतिबन्ध चाहानुहुन्छ
मार्टिन भिजल्याण्ड op एक पुलिस राज्यमा, तपाईं फिलिपिन्स पुलिस र "मद्दत" प्रदायकहरूमाथि प्रतिबन्ध चाहानुहुन्छ